माओवादी साँच्चै घेराबन्दिमा
जुलाइ २५, २००८
माओवादीका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामराजाप्रसाद सिंहले हारेपछि माओवादीले सचिवालय बैठक बसेरै निष्कर्ष निकालेको थियो-अब हामीलाई घेराबन्दि गरिंदै छ भनेर । के साँच्चिकै घेराबन्दिमा अहिले परेका हुन ? कि राष्ट्रपति निर्वाचन पछि मात्रै घेराबन्दिमा पर्न थालेका हुन त माओवादी...
प्रचण्डमाथि प्रमद्वारा अंग्रेजीमा प्रहार
जुलाइ २४, २००८
[मैले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रि पदबाट हटेलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले फेरि आफैं प्रधानमन्त्रि बन्न षडयन्त्र गर्न लागेको समाचार लेखेको थिएँ । आज जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले जनआस्था वर्ड फाइलमा पठाए । पढ्दै गएको त हिजो मैले लेखेको ”...
राजिनामा लगत्तै प्रधानमन्त्रि बन्न अर्को षडयन्त्रको योजना
जुलाइ २३, २००८
राजिनामा दिन पनि भातरसितै सल्लाह ? तपाइँहरुलाई लागे होला- अब गिरिजा प्रसाद कोइराला सत्ताबाट हट्ने भए । राष्ट्रपति बन्न माओवादीले दिएनन । प्रधानमन्त्रिबाट नहटि सुखै छैन किनभने अब नयाँ सरकार निर्माणको बाटो खुलेको छ । नयाँ सरकार, नयाँ...
मधेशी भेषका भारतिय एजेन्ट
जुलाइ १२, २००८
-एकलाल यादव तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता महन्त ठाकुर नेपाली कांग्रेसको भर्‍याङ चढेर पटक पटक मन्त्रि भए। तराइका नेता उनलाई कांग्रेसलेनै बनायो । तर संबिधान सभाको चुनाव अघि त्यसैलाई लात हानेर उनले तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)...
यति धेरै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको धन्दा के ?
जुलाइ ९, २००८
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरुबारे छफलफल हुँदा नामका विषयमा ह्र्स्व राख्ने कि दिर्घ भन्ने विवाद सुल्झाउन नसकेरैपनि बिभाजन हुन्छन भनिन्छ। हुनपनि त्यस्तै अवस्था छ नेपालमा। २०४५-४७ सालसम्मपनि अहिलेको नेकपा (माओवदी) का अध्यक्ष नेकपा (मशाल) अर्थात मोटो मशाल (मशाल...
गणतन्त्रको भविष्य अनिश्चित: बिदेशी विशेषज्ञ
जुलाइ ५, २००८
देशमा गणतन्त्र आयो, राजतन्त्रलाई थान्को लगाइयो भनेर हामी खुशी त हुन्छौ । तर हाम्रो गणतन्त्रको भविष्य भने अझै अनिश्चित रहेछ । कतै हामी उधारो खुशि त मनाइरहेका छैनौ ? बिदेशी विशेषज्ञहरु त त्यसै भन्छन । नेपालमा मात्रै...
चुरिफुरी हरुवाहरुकै चर्को
जनताका लागि राजनिति गर्छु भन्नेहरु जनताबाट फालिएपछि चुपचाप बस्नुपर्ने हो । कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्म । कि त जनतामाझ जानुपर्ने हो लोकप्रिय बन्न । अनि जित्नेहरु हो नयाँ निति बनाउन, जनताका आवाजहरुलाई संबोधन गर्न सल्बलाउनुपर्ने । तर नेपालका...
साल दलको एकता टुट्यो, दोषी को ?
जुन २४, २००८
दुइ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि बिभिन्न हण्डर र ठक्करकाबिच पनि कायम रहदै आएको सात प्रमुख दलको एकता कोमामा पुगेको छ। त्यो एकता टुटायो कसले भनेर जनताका अगाडि दोषी नठरिनमात्रै एकले अर्कालाई आरोप र झेलमेल गरिरहेका छन ।...
एमाले-माओवादी सहमतिले पाउला त देशले निकास ?
जुन २०, २००८
यहि हुन्छ भन्ने अवस्था त छैन । तर एमाले र माओवादीबिच सरकार सञ्चालनमा शक्ति बाँडफाँड गरेर जाने अवस्था देखिएको छ । यि दुई दल मिले भने बहुमत पनि पुग्छ सरकार चलाउन। गत निर्वाचन भन्दा अगाडिदेखिनै आम जनताको...
कांग्रेसले नछोडेपछि हट्ने भो माओवादी सरकारबाट
भोलीबाट नेकपा (माओवादी) सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । आज नेकपा (माओवादी) को केन्द्रिय सचिवालयको बैठक प्रचण्ड निवासमा बसेर यस्तो निर्णय गरेको छ । कोइरालालाई राष्ट्रपति नदिए नेपाली कांग्रेसले सरकार नछोड्ने अडान लिएको भन्दै त्यसलाई प्रचण्डले अस्विकार गरे...